Ny lafaoro mitsonika, natao ho lafaoro fampidirana fantsona, manana a fahafaha-mitana totalin'ny 50 t ary ilaina
handatsaka-tsy lanja 40 t indrindra. Ny hery manjavozavo dia novokarin'ny inductors efatra nitaingina at voafaritra zoro amin'ny
ny lafaoro misy lafaoro misy a enta-mavesatra mifandray amin'ny 3,400 kW. Ny inductor tsirairay dia manasongadina ny «transformeur» namboarina ho an'ny asa fanaraha-maso tsirairay.
In ny hetsika ny tsy fahombiazan'ny inductor iray, ny hafa kosa mitazona ny voditongotra mafana at ny mari-pana raha ny diso kosa
soloina. Ny lafaoro dia vonona indray hiasa amin'ny famokarana aorian'ny a vanim-potoana ny 12 ora. Ny vy metaly dia
nampidina avy amin'ny alàlan'ny lafaoro misy lafaoro ary azo afindra at zero gradient ny ny fatana fandoroana at ny taha ny 4 t/h. Ny fihazonana-ary-casting lafaoro koa manaiky ny mitsonika amin'ny alàlan'ny lafaoro misy lafaoro. Izany dia ahafahan'ny vy ny haverina ny ny lafaoro mitsonika raha ilaina izany, dia toy izany koa at zero gradient.
Fiainana fanompoana Inductor ary fanoloana Time
The fiainana fanompoana an'ny inductor miankina amin'ny fahaiza-manao napetraka, ny karazana rafitra mangatsiaka, ny endrik'ilay fantsona, ary ny karazana voasarimakirana seramika. fanompoana ain'olona 250 andro dia voalaza fa ho an'ny rivotra-tony inductors Misy laharana at 250 kW, fa an'ny irery 100 andro ho an'ny naoty 400 kW. In na tranga, manodidina ny 1,600 ny famoahana vy t aluminium.4
Amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fiterahana vokatry ary karazana voasarimakirana seramika, azo atao 400-kW inductors ho hahazo lafin-javatra fiainana
250 andro ary bebe kokoa miaraka amin'ny famoahana vy an'ny 2,500 t/inductor. Na izany aza, fiainana fanompoana ihany 100 andro koa tsy fantatra. Orinasa miasa hafa tatitra fiainana fanompoana anton-javatra ny 15-27 volana.
ambony inductor naoty 900 kW ary bebe kokoa miaraka amin'ny protaham-pivoahana ny 30 t/ andro isaky ny inductor, mila tarihina
fikorianan'ny metaly ary ny fampangatsiahana be, manana tsy nefa niasa nandritra ny fotoana lava rehetra. Nampiseho ny traikefa voalohany fa mikoriana mahery antony fikaohon-tany ao amin'ny mijidina fantsona.
Na dia na dia izany aza tsy ilaina ny manadio ny fantsona, ny irina fanompoana fiainana ny ny mpampiditra dia mihena. fürNy fanatsarana dia natao tamin'ny alàlan'ny fampihenana ny torolàlana mikoriana ary amin'ny fanomezana a milamina kokoa rano hihena
rafitra, izay manome fanantenana ho an'ny fahazoana ny fiainana fanompoana anton-javatra ny 12 volana ho an'ny avo-mpampiditra herinaratra.
Ny alim-bary vita amin'ny aliminioma dia azo zahana amina singa hafa miempo:
• mivantana-lafaoro mafana (gazy na solika-voaroaka) miaraka amin'ny toerana fanarenana hafanana
• lafaoro fandrendrehana fampidirana, karazana fantsona na fantsona.
Ny safidin'ny singa dia miankina indrindra amin'ny fisian'ny sy ny endrika angovo ary ny famokarana vola lany.
Miantso antsika ny famatsiana solika ankehitriny ny re-manombatombana ny amin'ny ho avy. It is ny antenaina fa Ny fidangan'ny vidin-tsolika dia ilaina ihany koa an fampiakarana ny vidin'ny angovo mpisolo toerana- herinaratra- tamin'izay no nieritreritra dia tsy maintsy be nomena
ambonin'izany rehetra izany ny ny fampiasana optimum an'io endrika angovo mpisolo toerana io. Eto, manolotra ny lafaoro fampidirana a
ambony-singa fampiasana fampiasana herinaratra, satria ny hafanana dia vokatry ny fampidirana herinaratra mivantana ao amin'ny fandroana.
Miakatra ny asa vola lany any amin'ny firenena indostrialy sy ny vidin'ny metaly ambonimbony dia manery antsika ny naverina ambany aza-kilasy, hazavana-refy fandrefesana ary ny mampiasa a singa mitsonika izay misy ny anton-javatra tena ilaina fa mamaritra ny fanodinana vola lany ambany, izany hoe ny angovo vola lany, mandronika fatiantoka, fikarakarana vola lany, ary ny asa vola lany.
Sokajy Technologies Tags alika induction oven, vy miempo, alim-pitobiana alimo, alim-biriky alikaola, alim-bobongolo, ala mando afovoany, mividy savovo aliminioma, fofona alimo induction, induction aluminium fusion, lafaoro mitsonika fampidirana, lafaoro fandrendrehana fanalefahana induction, mitsonika sombin-aluminium Post Fikarohana